I-garlic | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Ubuchwepheshe bokutshala ugarlic ebusika
I-garlic iyisitshalo esingapheliyo. Uma unquma ukukhula i-garlic yasebusika, kungcono ukunakekela lokhu ekwindla. Njengoba utshale lesi sitshalo esibhakabhaka ebusika, ngonyaka ozayo uzothola ugarliki wekhwalithi elihle kakhulu nosayizi. Uyazi? I-garlic izuze ukuthandwa kakhulu futhi inezinhlobo ezingaphezu kuka-70.
Umonakalo wegalikhi emzimbeni womuntu
Ngokuqinisekile wonke umuntu kusukela ebuntwaneni uyazi ukuthi igallic ungudokotela obaluleke kakhulu, ikakhulu ebusika. Phela, ngalesi sikhathi ukuthi umkhuhlane womuntu unamandla kakhulu. Ngakho-ke, wonke umuntu unconywa ukusebenzisa i-garlic ngokuvimbela. Kodwa akekho oqagela ukuthi ukulimala ku-garlic nakho kungaba okuphawulekayo. Okungenani ukuntuleka okukhulu kwegalikhi kungenziwa ngenxa yephunga layo.
Ukuhlukahluka kwesicelo sikagalikhi: ukwakheka nezakhiwo eziwusizo
Ukuzwa kokuqala ngisho nokukhulunywa kellicisi kuyiphunga layo (kusuka kumakhemikhali e-sulfuric). Abanye abantu abanjengaye, abanye abakwenzi. Kodwa iphunga likagalikhi liyinto ephathekayo, kodwa ukusiza kellic (ukubaluleka kwayo) kuyinto ecacile nenhloso. Ake sibheke lokhu okuvela kumaphuzu okubuka ahlukene. Inani lokudla okunomsoco wegalikhi Etafuleni lethu, i-garlic ikhona emafomu amathathu: okusha, efomini ifomu, futhi nangendlela yemifino eluhlaza.
Isikhathi esihle sokutshala i-garlic yasebusika, noma lapho ukutshala i-garlic yasebusika
I-garlic iyadingeka izitsha eziningi esazijwayele, ama-marinades, kanye nokugaya, futhi ziyisebenzisela ukwelashwa nokuvimbela ukushisa kwonyaka. Kunezindlela eziningi zokupheka zemithi yendabuko ukuthuthukisa ukukhulelwa, ukuthuthukisa inhliziyo, ukuhlanza nokuvuselela umzimba. Akukubi ukuthi zonke lezi zinhloso zikhule embhede wakho, futhi azithengi igalikhi.
Izikhala ze-garlic ebusika, ukuthi ungagcina kanjani igalikhi ebusika
Ngokungajwayelekile ngokuvuthayo nokuvuthayo, okuphethe iphunga elimangalisayo nokunambitheka okuyingqayizivele - lezi yizicathulo ezichaza ngokunembile igalikhi. Ungakwazi ukuhlangabezana nalomkhiqizo ngokuphelele kunoma yikuphi ikhaya, kokubili okuhlanzekile futhi njengengxenye ye-seasonings ehlukahlukene, ukugqoka kanye nezikhala. Ukuthandwa kwegalikhi akunakunqotshwa, yingakho wonke umhlali wasehlobo ohlakaniphile akafuni nje ukutshala izitshalo ezweni lakhe, kodwa futhi ukwenza isivuno ebusika, lapho i-garlic esheshayo iba yinto enhle ngempela.
I-Garlic Arrows: Yeka ukuthi Umkhiqizo Uhle Kangakanani Ukuze Uzuze
I-garlic nemicibisholo ehlumekile yegalikhi, ukusetshenziswa kwayo okusekelwa ngokwesayensi, ayithandwa nje kuphela njengomkhiqizo wokudla, kodwa futhi njengomuthi. I-garlic nezinzuzo zayo zomzimba ziyaziwa cishe zonke izizwe zomhlaba. Emazweni ahlukene, isetshenziswe ngempumelelo ekuphulukiseni nasekwelapha kusukela ezikhathini zasendulo. I-garlic isebenza njengamanye ama-immunomodulators, okwandisa izivikeli zomzimba zomzimba nokuvimbela amakhaza, izifo zenhliziyo, izifo ezibangelwa amagciwane.
Izindlela ezingcono kakhulu zokuvuna ugarlic aluhlaza ebusika
Namuhla, abesifazane abanolwazi baye bafika ngezindlela eziningi zokugcina imifino ebusika. Futhi i-garlic yayingenjalo, ngoba i-garlic efriziwe igcina zonke izindawo zayo ezizuzisayo, ukunambitheka kwayo nephunga elimnandi. Yigcine egumbini lefriji leqandisini. Kulesi sihloko sizochaza indlela yokuthola i-garlic eluhlaza ebusika.
I-garlic ekhulayo: ukutshala nokunakekelwa ensimini
Abaningi bethu basebenzisa igalikhi ngezinhloso zokugaya noma zokunakekela imithi, kodwa bambalwa bayazi ukuthi yiluphi uhlobo lwesiko olubizwa nge-botanical. Kungenxa yezitshalo ze-herbaceous zomndeni we-anyanisi, abalimi abaningi ezigaba zokuqala zikagalikhi bangakwazi ukudideka kalula ngokhula futhi babasuse emibhedeni, ngaleyo ndlela bezitshele ukuthi kungenzeka yini ukutholakala kwamavithamini.
Kungani i-garlic yasebusika ishayela entwasahlobo nokuthi yini okufanele ukwenze
Entwasahlobo esakhiweni, izakhamuzi eziningi zasehlobo zithukuthele zithola amaqabunga aphuzi. Futhi lokhu akuyona nje umphumela omubi, kodwa futhi uphawu lokuthi ubuchwepheshe bezolimo we-garlic ebusika obukhulayo buphukile. Emva kwakho konke, emva kokuphuza kwamaqabunga, lesi sitshalo siyeka ukukhula ngokuphelele, futhi i-clove iyabola. Kungani i-garlic yasebusika ishayela entwasahlobo nokuthi yini okumelwe ikwenze, sicabangela kulesi sihloko.
Sijwayele ukucabanga nge-ammonia, isidakamizwa esisetshenziselwa ukuvuselela umuntu oswelekile ekwelapheni kwe-neuralgia, myositis, nokufakwa kokuhlanza. Kodwa kuvela ukuthi ukusebenzisa i-ammonia engadini kuyakwenzeka - ikakhulukazi, ukuchelela nokupuniza izitshalo ezinkulu: u-garlic no-anyanisi.
Yiluphi uhlobo lwegalikhi okufanele itshalwe ngaphambi kobusika: izinhlobo eziphezulu
I-garlic yisitshalo somndeni wase-Amarallis. Lokhu kungenye yezitshalo ezivame kakhulu zemifino emhlabeni. It isetshenziswa njengendlela okungeziwe ekudleni nemithi. Ngonyaka, amathani angaphezu kwezigidi ezingu-17 zikagalikhi avunwa emhlabeni. Le mifuno ingakhula nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Kulesi sihloko sizohlaziya ngokuningiliziwe zonke izinhlobo ezidumile nezinhlobonhlobo ze-garlic yasebusika (enezithombe).
Izinhlobonhlobo ze-garlic entwasahlobo yebhande eliphakathi
Lesi sihloko sizoba usizo kulabo abathandana nogalikhi futhi bafuna ukukhulisa lesi sitshalo esibalulekile esibalulekile engadini yakhe. Kuyo uzothola uhlu lwezinhlobo ezivame kakhulu zentwasahlobo yasentwasahlobo ngesithombe nencazelo ezokusiza ukuthi unqume uhlobo lwesitshalo olufanele.
Ukuvuna nokuvuna kahle i-garlic yasebusika
I-garlic iyisivakashi esivamile etafuleni, ikakhulukazi ekwindla-ebusika. Ukuba nelinambitheka emnandi futhi iphunga elinamandla, i-garlic iyisithako esibalulekile ekudleni izitsha, amasoso nama-saladi. I-garlic ibusika kanye nentwasahlobo. Kulula kakhulu ukuhlukanisa lezi zinhlobo komunye nomunye - kukhona ama-clove angu-5-6 ekhanda lika-garlic yasebusika, futhi phakathi nendawo kukhona isiqu samanga, ekhanda lentwasahlobo yasentwasahlobo kukhona ama-clove amaningi (izicucu ezingu-10-20), ayikho inkinga yamanga.
Indlela yokugcina igalikhi ebusika
Abalimi abaningi bakhula igalikhi endaweni yabo, futhi lapho kufika isikhathi sokuvuna, umbuzo uvela mayelana nokugcinwa kwawo. Esihlokweni sethu sizochaza ukuthi singagcina kanjani igalikhi ebusika ekhaya ukuze lingasomile, cabanga ngezindlela ezihlukahlukene zokulondoloza. Ukuvuna ukuvuna ukuvuna ebusika kufanele kwenziwe ngesikhathi esithile.
Indlela yokugcoba ugarliki nokuthi kaningi kangakanani?
Abalimi abanolwazi bayakwazi ukuthi uma uhlela kahle ukuchelela okunembile kwensimu yakho, awukwazi nje ukugcina imifino esekhulile nezithelo ezinkingeni eziningi, kodwa futhi ukwandisa kakhulu inani lokuvuna esikhathini esizayo. Namuhla sizokhuluma ngesimiso esicindezelayo sokuswakama, okuyinto ngokwemvelo kunesakhiwo sempande ebuthakathaka futhi sidinga ukuchelela okunengi ngesikhathi sesikhathi sokuthuthukiswa kwayo.
Sifundza imigomo yokutshala igalikhi
Isitshalo esingapheli esisinika amavithamini amaningi ehlobo nasebusika. Ukuze ukhule igalikhi ensimini yakho, ubeke isitimela kubo ebusika, udinga ukwazi izici ezibalulekile: indawo, isikhathi nemibandela yokutshala. Yamukela iseluleko esengeziwe, futhi ungondla ngokuvuna okwenziwe unyaka.
I-garlic eyomile: izinzuzo nokulimala, zokupheka
I-garlic yayaziwa abaningi njengokunambitheka okunomsoco futhi okunomsoco, enikeza isidlo ukunambitheka okhethekile nokuhogela. Uyaziwa ngamakhemikhali ayo futhi usetshenziselwa kakhulu imithi yendabuko. UPythagoras wambiza ngokuthi "inkosi yeziqholo", kanti amaSlav awamfaka endlini njengogada emimoya emibi nemimoya emibi. Izinganekwane eziningi zihamba ngalesi sitshalo esimangalisayo nemikhiqizo yayo yemilingo nokuphulukisa.
Yeka i-garlic ewusizo ewusizo nokuthi ungayithola kanjani
I-garlic isesimweni eside futhi isungulwe ngokwayo njengengxenye yezinhlobonhlobo zokuthakazelisa kwamakhemikhali emazweni ethu. Kodwa bambalwa abantu abazi ukuthi yiziphi izinhlobo eziwusizo nezingozi ezigcoke izigcawu zikagalikhi ngokwazo. Ake sibheke le nkinga ndawonye. I-garlic eklisiwe: ukubukeka nokunambitheka Ukubukeka komkhiqizo oqediwe kuxhomeke kakhulu ekutheni uqale kanjani inqubo yokuyiphunga: ingabe yayigcwele yonke into, noma ingabe uyayigaya, uyichohlile ngehlangothini oluphambene lommese noma uliqede .
I-garlic "Lyubasha": izici ezihlukahlukene nokulima
Abalimi abaningi bakhetha izinhlobo zasebusika zikagalikhi. Ngemuva kwalokho, baqala ukuqala, ngaphandle kokunikeza isivuno esikhulu. Phakathi kwalezi zinhlobonhlobo ezivelele i-garlic "Lyubasha", enezinzuzo eziningi, yingakho ephethe ukulimala phakathi kwabalimi. Humushela incazelo ku-isiZulu usebenzisa i-Google Translate? Humushela incazelo emuva ku-isi-Ukrainian Humusha Incazelo Variety "Lyubasha" - Ukukhiqiza Ukraine, kodwa kufanelekile ukulima hhayi kuphela Ukraine, kodwa futhi eRussia, Belarus, Moldova.
Ukutshala nini futhi kanjani ukutshala igalikhi yasebusika eSiberia: iseluleko esiwusizo
I-garlic, ngokungangabazeki, ingenye yezitshalo ezivame kakhulu ezitshalwe ngabantu. Sekuyisikhathi eside seyaziwa ngokuhleleka nokuphulukisa kwayo. Lezi zinto zihlinzekwa ngezici zokutshala i-garlic yasebusika eSiberia. Izinhlobonhlobo ze-garlic yasebusika Ezinhlobonhlobo ezikhona ze-garlic yasebusika, lokhu okulandelayo kuyathandwa phakathi kwabalimi baseSiberia: "I-Alkor" iyinhlobo ehlukahlukene yokuvuthwa, ikhanda liyi-pink-purple, isisindo sayo singafinyelela ku-35 g, ukunambitheka okubukhali, ukuvunwa okuqinile, izinhlobo ezihlukahlukene zitholakala egazini le-dwarfism virus; "I-SIR 10" iyinhlobonhlobo ephakathi kwezibhamu, ikhanda liyi-violet elula, isisindo sayo singasifinyelela ku-30 ​​g, ukunambitheka okubukhali, ukuhlukahluka kunqande izifo, kodwa ngezinye izikhathi kungase kutholakale ukubola kwebhaktheriya; "I-Skiff" iyinhlobonhlobo ephakathi kwezibhamu, ikhanda limhlophe ngomthunzi we-lilac, isisindo sayo singafinyelela ku-30 ​​g, ukunambitheka okubukhali, ukuhlukahluka ngokuvamile kuvame izifo, kodwa ngezinye izikhathi kuthinteka yi-bacteriosis nokubola okumhlophe; "I-autumn" iyinhlobonhlobo ehlotshisiwe yokucibungula, ikhanda limhlophe, kodwa linama-lilac noma elibomvu, ubukhulu bungaba no-40 g, ukunambitheka okubabayo, ukumelana nezifo; "Okuthenjelwayo" yizinto ezihlukahlukene phakathi kwezibhamu, ikhanda limhlophe ngomthunzi we-lilac, isisindo salo sifinyelela ku-70 g, ukunambitheka okunamandla, ukumelana nezifo, phakathi kwezici ezikhona izinga elihle kakhulu lokugcina, okukuvumela ukugcina isivuno kuze kube izinyanga ezingu-11.